Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 7.1.1. (Model D802) | Androidsis
Haddii maalmo ka hor aan ku baray cusboonaysii Samsung Galaxy S3 ilaa android 7.1.1Hadda waa markii ugu horreysay ee qaabka caalamiga ah ee loo yaqaan 'LG G2' oo ah dabka aan dabka lahayn ama nooca D802, kaas oo in badan oo ka mid ah uu yahay midka ugu wanaagsan ee casriga ah ee LG ee abid abuuray. Marka maanta ayaan ku barayaa cusboonaysii LG G2 D802 ilaa Android 7.1.1 si rasmi ah looma sii marin LinageOS 14.1, ama maxaa noqon doona sii socoshada Cyanogenmod 14.1.
Ayaa yidhi yaa Roms la kariyey mar hore ayuu dhintay? Waxa intaa dheer, yaa ku dhiiran kara inuu u maleeyo in LG G2 uu yahay terminal laga soo dhaafay markii, sidaan ku tusay fiidiyowga halkan ku lifaaqan ee aan ku bilawnay qoraalkan, waan aragnaa sida wanaagsan ee LG G2 ugu dhaqaaqo nooca ugu cusub uguna dambeeyay ee Android mahadsanid LinageOS?.
Fiidiyowga aan kaaga tagay kaliya khadadkaan kor ku xusan, marka lagu daro inaan ku tuso sida wanaagsan ee Android 7.1.1 ay udhaqaajiso qaabkeyga caalamiga ah ee LG G2 ama nooca D802, waxaan sidoo kale ku tusayaa adiga talaabo talaabo ah habka biligleynaya faylasha lagama maarmaanka ah ee aan u horseedi doonaan cusboonaysii LG G2 ilaa Android 7.1.1 .
Hoos waxaan ku sharxayaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u cusboonaysiiso LG G2-gaaga Android 7.1.1, laga bilaabo sida loo xidido oo loo rakibo TWRP-ka wax laga beddelay ama dib u soo kabashada, u soo degsashada iyo biligleynaya dhammaan faylasha lagama maarmaanka u ah si LG G2-du u shaqeyso sida maalinta ugu horeysa ee aan sii deyno, iyadoo farqiga weyn ee aan u cusbooneysiin doono waxa ilaa hadda ah nooca ugu cusub uguna dambeeyay ee Android.
1 Shuruudaha lagama maarmaanka u ah cusbooneysiinta LG G2 D802 ilaa Android 7.1.1
2 Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo LG G2 D802 ilaa Android 7.1.1
3 Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 D802 ilaa Android 7.1.1. Habka bilig-talaabo-tallaabo ah.
3.1 Habka dhalaalka
Shuruudaha lagama maarmaanka u ah cusbooneysiinta LG G2 D802 ilaa Android 7.1.1
Hayso boosteejada, LG G2 nooca D802, Xidid ku leh oo la cusbooneysiiyay TWRP Recovery noockeedii ugu dambeeyay ee la heli karo
A kaabta EFS galka haddiiba ay dhacdo.
A nandroid keydinta nidaamka oo dhan haddiiba aan gadaal u laabanno inaan wax walba uga tagno sidii ay ahayd ka hor geeddi-socodkii flash-ka ee Rom.
Hayso kayd dhammaan barnaamijyadeenna iyo xogta tan iyo markii lagu gudajiray ololka nalalka waan wada tirtiraynaa, in kastoo Waxaan shaqsiyan kugula talinayaa rakibid nadiif ah bilowga.
Hayso Dib udhiska USB waa la awood galiyay laga soo bilaabo goobaha horumarinta.
Bateriga ha lagu dalaco 100 x 100.
Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo LG G2 D802 ilaa Android 7.1.1
TWRP qaabkeeda 3.0.2.1 ka soo degso halkan.
Soodejiso Rom lineage-14.1-20170101-UNOFFICIAL-d802.zip laga soo xigtay
Soodejiso Gapps Android 7.1, nano ama micro lagu taliyay. Halkan dhammaan noocyada xusuusnow inaad doorato ARM + Android 7.1.
Marka seddexda feylood ee lagama maarmaanka ah la soo dejiyo, ka Waxaan nuqul ka sameysaneynaa adoo aan ka yareynin xusuusta gudaha ee LG G2 ama Pendrive si loogu rakibo dibedda iyada oo loo marayo OTG oo waxaan raacnaa talaabooyinkan illaa warqadda:
Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 D802 ilaa Android 7.1.1. Habka bilig-talaabo-tallaabo ah.
Waxaan kugula talinayaa marka laga reebo aqrinta talaabooyinka la raacayo cusboonaysii LG G2 D802 ilaa Android 7.1.1Waxaa lagugula talinayaa inaad fiiriso fiidiyowga aan kaaga tagay midig bilowga casharradan wax ku oolka ah, waana iyada dhexdeeda aan ku tusayo wax walba oo tallaabo tallaabo ah iyo waqtiga dhabta ah.
Waxaan galnaa habka Soo-kabashada iyo waxaan u cusbooneysiineynaa TWRP Recovery qaabkeedii ugu dambeeyay kaliya dhagsii ikhtiyaarka rakib oo dooro zip horey loo soo dejiyey.
Aynu aadno xulashada reboot oo aan dooranno Dib u soo kabashada.
Waxaan aadeynaa xulashada Tirtir o Nadiifi oo guji nadiifinta horumarsan y Waxaan xulanaa dhammaan xulashooyinka marka laga reebo waddada aan ku hayno feylasha nalalka Rom iyo Gapps.
Waxaan aadeynaa xulashada Ku rakib o Rakib y Waxaan marka hore dooranaynaa zip-ka Romka ka dibna waxaan doorannaa zip-ka Gapps-ka ama codsiyada Google ee asalka ah, had iyo jeer sida ay u kala horreeyaan, marka hore waxaan doorannaa Rom zipageOS ka dibna Gapps Zip.
Waxaan u dhaqaaqeynaa baarka si aan u fulino ficilka la codsaday taasi waa wax ka badan biligleynaya iyo rakibidda labada faylal.
Marka hawshu dhammaato waxaan doorannaa ikhtiyaarka ah Masax Cache & Dalvik o Nadiifinta Cache iyo Dalvik, mar labaad ayaan u dhaqaajinaynaa baarka markii aan dhammeyno waxaan dooranay xulashada Nidaamka Dib u Dhiska.
Tan waxaad awalba ahaan doontaa meesha lagaa tuuro ku raaxayso qaabkaaga LG G2 D802 oo ah nooca ugu cusub uguna dambeeyay ee Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » ROM » Sida loo cusbooneysiiyo LG G2 ilaa Android 7.1.1. (Qaabka D802)
Mahadsanid Francisco. Waan hoos ugu dhigayaa si aan u tijaabiyo. Dhamaan wanaag
Waad ku mahadsantahay casharka. Ma ogtahay haddii aad xididdada ku xidhato mushkilad?
Waad salaaman tihiin, marka hore WAAD MAHADSAN tihiin inaad noo ogolaateen inaan wax u helno lg g2 d802 aan ka tagnay ... weydiin, waxaan hayaa android 5.0.1 unuggu waa weyn yahay, waxaan rabaa inaan rakibo 7.1.1 laakiin dhibaato ayaan qabaa, ma lihi Hayso faylka efs ... Waxaan ku raadiyay sahamiyaha xididka, biraawsarka xididka, mana muuqato…. Waxaan ahay xidid Jawaab baan ka sugayaa, Argentina! Aad baad u mahadsantahay !!
Markii hore S3 markii aan dhowr waxyaalood ku sameeyay taleefanka gacanta, waan sameeyay aniga oo aan sameynin keydka feylka efs backup. wax walbana way shaqeeyeen tobankiiba !!
Miyaan ku samayn karaa lggeyga aniga oo aan taageerin galkaas?
Waad salaaman tahay, sidee tahay waxaan rabay inaan kuu sheego inaan durba awooday inaan rakibo oo ay ku shaqeyso mucjiso lg g2 d802 my. Waxaan doonayay inaan wax weyddiiyo, xagee kahelaa codsi deg deg ah oo fog oo aan kahelay warshada, taas oo ah mida markasta ka shaqeysa layaabka ???. Jawaab baan sugayaa, aad baad u mahadsan tahay !!
Wanaagsan! adoo raacaya dhammaan talaabooyinka nidaamku uusan bilaabin. Markii aan ka tagay astaanta LG daaqad madow ayaa soo muuqatay waxbana ma aysan qaban. Xalku wuxuu ahaa in lagala soo baxo CAF BootStack https://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/boot-g2-hybrid-bootstacks-t3183219 Masax masax, rakibo bootstack, ka dibna rakibo ROM iyo GApps sida aad ku tilmaamtay hagaha. Qaabkaas ayay iila shaqaysay dhibaato la’aan. Dhamaan wanaag!
Isla waxbaa igu dhaca aniga, laakiin ma geli karo soo kabashada, sidaad u gashay
Jawaab Jose Manuel Martinez Salvador
SALAAN, Waxaan jeclaan lahaa inaan helo CODSIGA DEGDEGA AH EE QODOBKA AYAA KA SOO BAXAY WAANA UGU FIICAN, XAGGEE AAN KA DEGI KARO ?, MA LAGA DHIGAY ???. JAWAAB AYAAN SII SALAAMAY !!
Waan ka xumahay ka hor intaanan kuu jawaabin, laakiin waa markaan arkay
ku tijaabi ZAZA REMOTE.APK
Ku jawaab KRMLO
Haye, waxaan u baahanahay caawimaad. Dhibaatadu waxay tahay inaan isku dayay inaan ku rakibo lg g2 d802-kayga, waxyar uun kadib markii dib loo bilaabay, calaamadda lg ayaa soo muuqatay ka dibna waa la saaray, wax walba halkaas ayaa lagu daayay. Mobiilku ma bilaabayo, waa sidii inaanan kor u qaadi karin nidaamka qalliinka, fadlan jawaabaha sug sida ugu dhakhsaha badan, waan ku faraxsanahay
Jawaab Sandy cordovi
Isla waxbaa igu dhacay aniga oo ah Sandy Cordovi.
Waxaan hilmaamay talaabada qalinka leh ee "Wipe Cache & Dalvik or Cache Cleaning and Dalvik" taleefankuna ma bilaabmo mana muujiyo calaamadaha nolosha.
Waad salaaman tahay Francisco, waa su'aal (haddii aad wali ku dhex socoto maqaalkan waqti ka waqti).
Waxaan sameeyay xididka LG2-gii ka dib talooyinkiinnii wanaagsanaa (kaliya waxaan rakibay cusboonaysiintii ugu dambaysay ee ay abtirsiintu bixisay bishii Ogos), runtii way fiicnayd waanan idinku hambalyaynayaa
Su'aashaydu waa: ma i siisaa cusbooneysiin cusub (waxaan sameeyay soo dejinta), sidee ayaan ugu sii wadaa cusbooneysiinta? Waxay la mid tahay markii aan rakibay markii ugu horreysay?
Waa maxay waqtiga la qiyaasay ee bilawga koowaad ka dib rakibidda?
Jawaab Jose Atay
Waxaan sameeyay tillaabooyinka oo dhan, laakiin sida dhowr ka mid ah kuwa dhajiyay, ma bilaabmayo. Sideen dib ugu soo ceshan karaa xakameynta taleefanka gacanta?
Google wuxuu bilaabaa tijaabinta barnaamijyada degdegga ah